नेपालको भुक्तानी प्रणाली प्रभावकारी भएन : नेपाल–कोरिया संयुक्त अनुसन्धान | गृहपृष्ठ
Home समाचार नेपालको भुक्तानी प्रणाली प्रभावकारी भएन : नेपाल–कोरिया संयुक्त अनुसन्धान
on: २ मंसिर २०७५, आईतवार २०:१० समाचार
नेपालको भुक्तानी प्रणाली प्रभावकारी भएन : नेपाल–कोरिया संयुक्त अनुसन्धान
मङ्सिर २, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क अफ कोरिया र कोरिया विश्वविद्यालयको सहकार्यमा गरिएको अनुसन्धानले नेपालको भुक्तानी प्रणाली प्रभावकारी नभएको देखाएको छ । प्रविधिसँग सबै जनता परिचित नहुनु, आईटीको अभाव र गाउँगाउँमा बैङ्कको पहुँच नपुग्दा भुक्तानी प्रणाली अझै प्रभावकारी हुन नसकेको अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेको हो ।
नेपालमा भुक्तानी र फछ्र्योट सेवा प्रणालीको अवस्था तथा आगामी दिनमा कसरी विकास गरेर लानुपर्छ भन्नेबारे समेत सो अनुसन्धानले समेटेको छ । आइतवार राजधानीमा आयोजित ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग बैङ्क अफ कोरिया नलेज पार्टनरसिप प्रोग्राम–२०१८’ कार्यक्रममा उक्त अनुसन्धान सार्वजनिक गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपालका लागि कोरियन राजदूत योङ्ग सिक पार्कले नेपालमा जलविद्युत्, कृषि र पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै सम्भावना रहेको बताए । अबको १२ वर्षभित्र कोरियाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीअन्तर्गत नेपालमा १७ करोड ७० हजार डलर लगानी गर्न सक्ने आश्वासन दिए । उनले नेपालमा वैदेशिक लगानी (एफडीआई)को प्रतिबद्धता आए पनि लगानी नभित्रिएकाले यसबारे खोजी गर्न अनुरोध गरे । अनुसन्धानमा बैङ्क अफ कोरियाको आर्थिक सहयोग रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बैङ्क अफ कोरियाका सल्लाहकार सेगन ताई लिमले अनुसन्धानपत्रले दिएको सुझावअनुसार काम गर्दा नेपालको भुक्तानी प्रणाली पारदर्शी हुने, समयको बचत र सरकारको आम्दानी बढ्ने दाबी गरे । अनुसन्धानले नेपाली परिवेशसँग कतिको मेल खान सक्छ त्यही आधारमा काम गर्न सकिने राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ । उक्त अनुसन्धानमा आधारित भएर राष्ट्र बैङ्कले नेपालको भुक्तानी प्रणालीबारे रणनीति बनाउने राष्ट्र बैङ्कका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए ।
उक्त अनुसन्धानले कोरिया र चाईनाबीच हाल सञ्चालित अली–पे भुक्तानी प्रणाली र भारतको पेटीएम प्रणाली जस्तै नेपालमा पनि यस्तै खालको प्रणाली बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । तर, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भने टेलिकम्यूनिकेशन संस्थाहरूले यस्तो सेवा दिन सक्ने वा नसक्ने भन्ने हेर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्क भुक्तानी विभागका उपनिर्देशक कृष्णप्रसाद शर्माको भनाइ छ ।
हाल राष्ट्र बैङ्कले आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रस सेटलमेण्ट सिष्टम) स्थापना गर्दै छ । उनले यो प्रणाली २०१९ सेप्टेम्बरसम्ममा स्थापना हुने बताए । यो प्रणाली स्थापना भएपछि ग्राहकले जसको खातामा पैसा पठाएको हो, उसले तुरुन्तै प्राप्त गर्न सक्नेछ अर्थात् वास्तविक समयमा पठाइएको रकम फछ्र्योट हुनु हो ।
हालसम्म राष्ट्र बैङ्कले भुक्तानी प्रणालीलाई विकास गर्न आफ्ना तर्फबाट काम गरिरहेको भुक्तानी विभागका उपनिर्देशक शर्माले बताए । यसै सन्दर्भमा भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी ‘भुक्तानी तथा फछ्र्योट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पेश भइसकेको छ । सो विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पास हुनसक्ने उनको भनाइ छ । अध्ययनमा कोरियाली अर्थशास्त्रीहरू डा. जुन मु याङ, डा. म्योङ्ग कि किम, डा. ईन सेआक किम, डा.चुङ्ग ल्यो लीलगायत संलग्न थिए ।